National Power News:: हिसिला भन्छिन्, “मैले गल्ती गरेँ माफी पाउँ” National Power News:: हिसिला भन्छिन्, “मैले गल्ती गरेँ माफी पाउँ”
हिसिला भन्छिन्, “मैले गल्ती गरेँ माफी पाउँ”
२१ चैत, काठमाडाैँ – नेपाल देश खारेज गर भन्दै नारा लगाएकी नयाँ शक्ति नेपालकी नेतृ हिसिला यामीले अाज माफी मागेकी छिन् । काठमाडाैँमा अाज पत्रकार सम्मेलनकाे अायाेजना गरी नेतृ यामीले बेहाेसी र अर्धचेत अवस्थामा निर्वाचन एेन खारेज गर भन्न खाेजेकाे तर भुलवश अन्यथा भएकाे भन्दै माफी मागेकी हुन् ।
आइतबार निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिने क्रममा प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, उनकी पत्नी यमी लगायतलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसक्रममा यमीले ‘यो देश खारेज गर’ भन्ने नारा लगाएकी थिइन् ।
झण्डै एक घन्टाको ठेलमठेलमा आफू अर्धमूर्छित हुन पुगेको तर, पति डा. बाबुराम भट्टराई लगायत सम्हालेको उनले सुनाइन् ।